Articles tagged 'cyril ramaphosa'
SA cranks up heat on ED 26 January 2019 HARARE - Zimbabwe has once again attracted unwanted global interest in the wake of the trail of terror left by the country's security forces. In an unusually candid rebuke of Zimbabwe, President Cyril Ramaphosa's governing African National Congress (ANC) of South Africa — a sister liberation m...
Ramaphosa angers Zimbabweans 24 January 2019 HARARE - Zimbabweans have expressed anger at South African president Cyril Ramaphosa's claims that the country was on the path to democracy, at a time when at least 12 people were shot dead for exercising their constitutional right to demonstrate. Speaking at the International Labour Organisat...
Zim authorities face ICC threat 22 January 2019 HARARE - South Africa's main opposition party, the Democratic Alliance (DA), has challenged President Cyril Ramaphosa to take urgent steps to stop the on-going crackdown against dissenting voices by Zimbabwe's security forces. The party also warned ominously that should Ramaphosa fail to inter...
End sanctions on Zim, Ramaphosa tells EU 17 November 2018 HARARE - South African president Cyril Ramaphosa, pictured, has called on the European Union (EU) to remove sanctions on members of Zimbabwe's ruling elite and said the country has turned a “wonderful corner”. The EU maintains a travel and economic embargo on several Zanu PF officials, top mil...
UK's ED backing not good enough: SA pledges to assist Mnangagwa 30 August 2018 HARARE - The United Kingdom's endorsement of President Emmerson Mnangagwa will not matter much as long as Zimbabweans still question his legitimacy, analysts said. While the European Union (EU) and the United States have concluded that the elections failed the credibility test, British Prime M...
Ramaphosa congratulates ED 4 August 2018 HARARE - South Africa President Cyril Ramaphosa yesterday called President Emmerson Mnangagwa and affirmed their commitment to a South Africa-Zimbabwe strategic partnership, Union Buildings said. Mnangagwa was due to be sworn in after securing a lean victory over MDC Alliance leader Nelson Cha...
SA to release framework to raise $100bn 16 July 2018 JOHANNESBURG - The South African presidency is planning to release a framework document within two weeks, which will outline in greater detail how the government plans to raise $100 billion over five years. Trudi Makhaya, economic adviser to President Cyril Ramaphosa, told City Press during an...
Sadc won't bring Mugabe joy 17 March 2018 HARARE - The arrival in Zimbabwe of Sadc chairperson Cyril Ramaphosa today, is recognition of President Emerson Mnangagwa as president, analysts said yesterday, dismissing protests by ousted Zimbabwean leader Robert Mugabe that he was overthrown by his former deputy through a coup d'état and h...